Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. निर्मला हत्या काण्ड : दिलिपसिंह विष्ट २४ दिनपछि थुनामुक्त – Emountain TV
निर्मला हत्या काण्ड : दिलिपसिंह विष्ट २४ दिनपछि थुनामुक्त
कञ्चनपुर, २६ भदौ । कञ्चनपुरमा १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका दिलिपसिंह बिस्ट अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका छन् ।
प्रहरीले विष्टले नैं बलात्कार गरि हत्या गरेको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । विष्टलाई जिल्ला अदालत कञ्चानपुरले यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको भन्दै थुनामुक्त गरेको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय कञ्चनपुरले अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो केही प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनलाई मंगलवार थुनामुक्त गरेको छ । हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका बिष्टलाई नेपाल प्रहरीले भदौ ४ गते पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
उनको पक्राउको विषयलाई लिएर कञ्चनपुरवासीले निरन्तर विरोध तथा धर्नाको कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । थुनामा राखेको २४ दिनपछि आरोपी बिष्टलाई निर्दोष सावित गर्दै मंगलवार रिहा गरिएको छ ।
विष्टसँगै आँचल भनिने रोशनी बम र अनिता बम पनि छुटेका छन् । जिल्ला अदालतले आँचललाई साधारण तारेखमा र अनितालाई ३० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको कञ्चनपुरका एसपी कुवेरसिंह कडायतले जानकारी दिए ।
निर्मला हत्या काण्डको छानवीन गर्न सरकारले केन्द्रिय स्तरबाटै छानबीन समिति गठन गरेको छ । छानबीन समितिले आफ्नो अनुसन्धान जारी राखेको छ ।